Sunday November 03, 2019 - 14:31:57 in Wararka by Warqabadka Koonfurta soomaaliya
sarkaalkaaso lagu magacaabo C/Qaadir Xasan Qoondhe qibraddiisi milatariga daafaca dalka goobta uga waramayay la kulanka bulshada Soomaalida, ayaa geesta kalana carrabka ku dhuftay sida uu ugu faraxsan yahay Switzerland inay isku arkaan dadkiisi isago hawl qaran debedda ku marayo.
Madashan waxaa yimid bulshada qaybaheeda kala geddisan sida:-fanaaniinta Cumar Shariif, Maryan Ruun iyo Maandeeq Nuur Garaasho heeso waddani ah ka qaaday, iyado dhinica dhallinyaraduna uu u hadlayay Mudane Sabriye oo ah qof aad u furfuran iyo qubaro kalo milatariga aqoon durugsan u leh oo isu-imaatinkani ka hadalo koobano nuxur lehi ka soo jeediyay.
Xafladdan waxaa sido kale tababarucaad loogu samaynayay dadka fatahasduhu ay ku dhufteen dalkeena Soomaaliya, gaar ahaan reer Baladwayne oo barnaamijkaasi uu hormood ka ahaa agaasimihii hore ee Somali Airline garoonka Muqdisho Mudane Cashar Xasan.
Guntii iyo gabangabadii, xafladdani xalay Zurich ka dhacday waxay ku soo idlaatay jawi aad u heer sareeya ujeeddooyinkii loogu talagalayna ay gurmadku fatahaaduhu u wayn yahay u meel maray sidii loo qorsheeyay, walow degmada Bardaale dhanka JBM oo iyana daadadku ku dhifteenooy aafeeyeen goobta aan lagu soo hadal qaadin, taaso aad mooddo halkaasi inay eexi ka muuqan karayso loogu kala eexanayo dadyowga isku mid ah ay biyaha fatahaaduhu wada saameeyeen imikadan joogadeenu geeduhu ay dul saarsaaran yihiin, sida ay markhaanti u ahayd warbaahinta ku bohowday Koonfurta Soomaaliya loo yaqaan afka qalaad Southern Media Co-Operation tiimkeedu uu hoggaaminayay madaxa guud Dr C/LLaahi Ibraahin Xasan Amaandhoorey, waxaana mikarafoonka xiriirintu uu hayay wariye sare Xasan Muuse Sabriye intii martisharaftu khudbanaysay masraxu ku soo dhoweeyay Dr Amaandhoorey oo sido kale meesha si cad uga sheegay in fatahaadaha sanadkan kaliya aanay ku dhufan Baladwayn oo qura, balse gobollada Jamhuuriyadda Barakaysan Ee Maayland-na ay harqiyeen haba ugu darnaatee degmada Berdaale JBM, tahayna in labadooduba waa Berdaale iyo Baladwayne si dareen Islaamnimo leh loogu wada gurmado, iyado kulanku gudoonkii hore ee guddiga doorashooyinka Jamhuuriyadda Soomaaliya sanadihii 1960-meeyadii Mudane Xaaji Maxamed Awoow Mayowna uu si diiran u bogaadiyay sarkaalka iyo saraakiisha da'da yar fursadaha loo siinayo hoggaaminta dalka iyo daaficiisu.
Gurmado garbaha isqabsada gunnimo geeridaa ka roonbaaba la yiriye amar Alle laakiin!!